Grande-Bretagne By Train - 8 On Off-Track Ary Tips | Save A Train
Home > Fiaran-dalamby Britain > Grande-Bretagne By Train - 8 On Off-Track Ary Tips
Grande-Bretagne nitso-drano amin'ny alalan'ny tambajotra lalamby be dia be izay nanan-kery ny ara-tsosialy tantara ary ny fampandrosoana ara-toekarena ho an'ny taranaka.
Ary raha misy ianao lalamby mafana fo, ny UK rail fialan-tsasatra mahavariana manamora asa amin'ny toerana rehetra ny lalana avy Aberdeen ho Penzance.
Koa raha ny fonao ny Ento ny nahita Grande-Bretagne lamasinina, eto dia amin'ny fito sy eny-lalana torohevitra.
Nitsidika an'i Glasgow Central Station dia tsy maintsy - tsy izany ihany no hifandray anao ny Scotland Toerana mahafinaritra mahafinaritra, fa izany ihany koa dia manana 91 isan-jato ny tahan'ny tsy fankatoavan'ny Watchdog Transport Focus, peo tompony Paul Lyons mihazakazaka Tours efatra isan'andro, ary ny kintana eny amin'ny TV BBC azy manokana andian.
Birmingham New Street dia gara iray hafa izay mirehareha amin'ny fahafaham-po amin'ny mpanjifa. Ny West Midlands lalamby redeveloped Hub dia tanteraka ao 2015 ary mirehareha ny safidy ny mangatsiatsiaka trano fisakafoanana, anisan'izany ny tao-trano dimy Guys Burger mpiara-- tonga lafatra ny lavaka-stop.
Tsy misy lalamby tena mafana fo dia handao Grande-Bretagne tsy misy tsara trandrahana Londres ny Mpanjaka Cross Station. Tena manaraka ny Mpanjaka Cross St Pancras Underground Station, Regent akaiky ny Park ary ny British Library, ary trano fonenana mistika 9 ¾, ny lasa teboka ho an'ny Hogwarts Express - hoy ampy.
Train App Raildar dia manasongadina mivantana sarintany rehetra lamasinina ny UK rail Network - ny mavitrika Version na dia mampiseho fiarandalamby mifindra manodidina. Zavatra tsy tia ny Fantasy lamasinina fampiharana dia ahitana ihany koa fandrindran-takila Junction lalana sy ny sarintany - inona no tena hevitra!
5. Light famakiana
Raha toa ianao rehefa mifandray riveting lalamby-mamaky teny, Mirazotra-dalana, pejy mahita mpanoratra Ian Marchant maka wry Jereo 175 taona Grande-Bretagne ny mieritreritra be momba ny fiaran-dalamby. Nanoratra ny filan'ny nofo sy ny hatsikana, panahy izany ny hahatakatra ny British toetra sy ny kolontsaina.
6. Famakiana ny tena mpankafy
Tamin'ny faramparan'ireo taona 19faha sy ny fiandohan'ny 20faha taonjato maro, George Bradshaw mpitarika ny lalamby dia ny fampiharana ny andro sy nanome ny vaovao farany momba fiaran-dalamby lalana manodidina Grande-Bretagne sy manerana ny kontinanta Eoropa. The Aprily 1910 Ny torolàlana dia nosoratana tamin'ny tampon'ny tampon'ny tambajotran'i Britain ary nanjary Baiboly ho an'ny mpandeha fiaramanidina - mitady fanontana vita pirinty an-tserasera amin'ny Amazon.
7. fianarana Online
Free na ara-drariny-priced ny fidirana aterineto dia mora hita ao amin'ny fiaran-dalamby UK maro lalana sy ny tanàna foibe, koa raha ny -dalana dia anisan'ny intsony -tany, fianarana ho an-tserasera diplaoma ny tiany ny Anglia Ruskin Distance afaka manohy fianarana uninterrupted. Ary misy zavatra momba ny fiainana-fanamafisana Mifampiresaka ny mpiara-mianatra amin'ny firenena samy hafa ianareo raha hakodian'ny olona manodidina tsiraka ary manerana clifftops.
Araho ireo sy eny amin'ny fito-làlana toro-hevitra ho an'ny Britanika lalamby fety hanadino na oviana na oviana ianao - mahita anao amin'ny gara.
Manana toro-hevitra ho an'ny lalamby Tsidika? Zarao azy ho amin'ny fanehoan-kevitra fizarana ary raha mila ny fiaran-dalamby – Save A fiaran-dalamby.
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary omeo anay fotsiny ny voninahitra amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy, na ianao dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbritain-by-train-8-on-and-off-track-tips%2F%3Flang%3Dmg - (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
#ukrail britain britrail rail lalamby travelengland